एमाले र माओवादी बीच बाटोमै भड्कन्छन् :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
Thursday, February 22, 2018 | २०७४ साल फाल्गुन १० गते, बिहिबार
एमाले र माओवादी बीच बाटोमै भड्कन्छन्
डा.सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक
त्रिभूवन विश्व विद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको विषयमा विद्या वारिधि गरेका हुन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका उतार चडावका विषयमा सबै भन्दा जानकार मानिन्छन् डा. केसी । यस विषयमा उनका करिव एक दर्जन पुस्तक प्रकासित छन् । पत्रपत्रिकामा हजारौं आर्टिकल प्रकासित छन् । कम्युनिष्ट पार्टीबीच हुने एकीकरण तथा विभाजनका मामिलामा विगत ३० दशक देखि उनले गरेका भविष्यावाणी मिल्दै आएका छन् । २०४७ सालमा मालेका तत्कालिन नेता मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको अवधारणा ल्याउँदै गर्दा डा. केसीले कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा झुण्ड बहुदलीय व्यवस्थाको खिलापमा लाग्ने विश्लेषण गरेका थिए ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुका नेताहरु मुलतः दरवारबाट संचालित हुनेगरेको विश्लेषण डा. केसीले गर्थे । गणतन्त्र स्थापना पछि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बागडोर दिल्लीको हातमा पुग्ने विश्लेषणका साथ डा. केसीले थुप्रै लेखहरु लेखेका छन् । मुलुकका ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरणको लक्ष्य राख्दै चुनावी तालमेलको सहमति भएको छ । यस विषयमा डा. केसीको विश्लेषण के छ त ? प्रस्तुत छ तरुणका गरिएको कुराकानी ।
० अहिले जसरी वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको छ । यसले मुलुक दुई धु्रवमा धु्रवीकृत हुन लागेको हो ?
– त्यतातिर मुलुक गएको हो, तर वाम गठबन्धन भन्ने मलाई लागेको छैन । केही घटकहरूले आफ्नो चुनावी व्यवस्थापनका लागि तालमेल गरेका हुन् । तर यो पनि विश्वसनीय हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । म सुन्दै छु, अहिले बाबुराम भट्टराईले पनि त्यहाँबाट छुट्टी लिइसके । त्यसैले यो खाली चुनावी तालमेलको मात्र कुरा हो । वाम गठबन्धनको कुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० तर यो गठबन्धनमा अन्य साना वामपन्थी दल राजमो र नेकपा (माले) पनि आउन खोजेका छ नि ?
– सबै अस्तित्वको रक्षाको प्रश्नमा छन् । सबैलाई एउटा चुनावी वातावरण चाहिएको छ । आफ्नो पायकअनुसार सबै दल यताउति हुन खोजेका छन् ।
० नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन् कि सक्दैनन्, तपाईलाई के लाग्छ ?
– आउन नसक्ने कुरा त के भयो र ? तर ल्याउनेतिर भन्दा पनि आफ्नो चुनावी मोर्चाबन्दी बनाउन मात्र यो गठबन्धन भएको छ । सैद्धान्तिक व्यवस्थापनतर्फ यसको अभिमुखीकरण नै भएको मैले देखेको छैन ।
० सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउन सक्दैनन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
– त्यो अर्को कुरा हो । यिनीहरू सैद्धान्तिक तत्व नै होइनन् भन्ने मेरो ठम्याइँ हो ।
० सैद्धान्तिक तत्व भनेको ?
– यी दलहरु कम्युनिज्म सिद्धान्तमा छैनन् भन्ने मेरो बुझाई हो । यिनीहरूको अवसर र स्वार्थको गठजोड मात्र हो । त्यसैले विचारको कुरा अर्कै हो । यो त खाली अवसरको व्यवस्थापन मात्र हो । चुनावी व्यवस्थापन खोजेका हुन् ।
० माओवादी र एमाले कम्युनिज्म नै होइनन् त ?
– नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै आधारभूत वर्गबाट उठेको नभई पढेलेखेको टाठाबाठाहरूको खेल हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
० भनेपछि यो तालमेल चुनावमा भोट ल्याउने उपाए मात्र हो त ?
– चुनावी व्यवस्थापनका लागि उनीहरूको तालमेल मात्र हो यो । यो कुनै गठजोड, गठबन्धनभन्दा पनि चुनावी तालमेलको अभ्यास हो ।
० नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका पार्टी नै छैनन् त ?
– नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी कुनै पनि छैनन् । डेमोक्रेट पार्टीहरू पनि डेमोक्रेट छैनन् । खाली सत्ताको व्यवस्थापनका लागि एक ठाउँमा आएका झुण्ड मात्र हुन् । वामपन्थीहरूले हँसिया हथौडालाई टे«डमार्क बनाएका छन् । विचारमा समर्पित छैनन् भन्ने मेरो तर्क हो ।
० अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ, यसले चुनावी परिणाम कस्तो आउला ?
– अहिलेको गठबन्धनको हिसाबले त वाम पक्षमा नतिजा जान सक्नुपर्ने हो, तर जनताले नेताहरूको जुन अवसरवादी चरित्र छ, यसलाई कसरी लिइरहेका छन् ? त्यो भन्न सकिँदैन । मधेसको प्रश्नमा मधेसवादी दलहरूले जित्नुपर्ने हो, तर त्यहाँ कांग्रेसले जित्यो । त्यसैले नेपालको राजनीति अझै पनि एउटा संक्रमणकालमा छ र मतदाता पनि अन्योलमा छन् । त्यस्तो बेलामा उनीहरू कस्तो किसिमले प्रस्तुत हुन्छन् ? त्यो दाबी गरेर भन्न अहिले गाह्रो छ ।
० प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो होला कि वाम गठबन्धन ?
– सरसर्ती हेर्दा वाम गठबन्धन बलियो हुने सम्भावना छ किनभने नेपालको मत वामपन्थीतिर झुकेको देखिन्छ । तर वामपन्थीको चरम अवसरवादी चरित्र अहिले जसरी आइरहेको छ, त्यसलाई जनताले सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् । मतदाताहरू संक्रमणकालमा देखिन्छन् । संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ भनेर भन्न एकदमै कठिन हुन्छ ।
० दुवै गठबन्धन सफल होला कि नहोला ?
– गठबन्धन चरम अवसरवादमा आधारित भएको देखिन्छ । भोलि कुन पक्ष कहाँ गोलबद्ध हुने हो ? त्यो पनि भन्न सकिँदैन । आफूले भनेको जस्तो नहुनेवित्तिकै ऊ भड्किन्छ । जस्तो कि बाबुराम भट्टराई भड्किए । यस्ता उदाहरण छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा पनि आफूले भने जस्तो भएन, सिट पाइएन भने भड्किने सम्भावना रहन्छ ।
० तर केहीले एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलन चुनावी तालमेलका लागि मात्र हो, चुनावपछि यी दुई पार्टी एक हुनै सक्दैनन् भन्छन्, तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
– त्यो चाहिँ चुनावको परिणामले निदृष्ट गर्छ । चुनावको परिणाम दुवै दलको पक्षमा भयो भने उनीहरू एकताको चरणसम्म अगाडि बढ्छन्, तर चुनावको परिणाम प्रतिकूल भयो भने उनीहरू बीचबाटै भड्किन सक्छन् । बाबुरामको जस्तो नतिजा कुनै पनि दिन आउन सक्छ ।
० मोहन वैद्यको कम्युनिस्ट पार्टी पनि यसटक चुनामवा जाने लागेको छ नि ?
– मोहन वैद्यको कम्युनिस्ट पार्टी जाने भनेको छ, तर त्यसको कुनै तात्विक उपस्थिति हुँदैन । किनभने उनीहरू चुनावी प्रक्रियाबाट अलगथलग भइसकेका छन् ।
० तर नेमकिपा एक्लै चुनावमा जान खोजको छ । सानातिना पार्टी एक्लै चुनावमा गए जित्न सक्लान् र ?
– रोहितले एक ठाउँमा जित्न सक्लान् । अरु सानातिना वाम उम्मेदवारहरूले नेपालभर कहीँ पनि जित्ने ठाउँ छैन ।
० माओवादी अहिले सरकार र प्रतिपक्षी दलसँग गठबन्धनमा पनि छ, नैतिक रूपमा माओवादीले यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
– यो चरम अवसरवाद हो । संसदीय व्यवस्थामा सत्ता गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै पनि किसिमको तालमेल गर्दैनन् । तर यहाँ सत्ताको प्रश्नमा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने, चुनावको प्रश्नमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग तालमेल गर्ने नीति माओवादीले ल्यायो, यो झनै डरलाग्दो अवसरवाद हो ।
० प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउन सक्छ कि सक्दैनन् ?
– संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विशेषअधिकार हुन्छ, तर नैतिक जवाफदेहिता र राजनीतिक जवाफदेहिता पनि चाहिन्छ ।
० अहिले गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेका छन् । आचारसंहिता बाहिर हो भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
– संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार हुन्छ । तर त्यसको नैतिक र राजनीतिक जवाफदेहिता पनि चाहिन्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीसँग भएको म पाउँदिन किनभने आफ्नै सरकारको प्रमुख गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग मिलेको छ । तिनलाई उनले निकाल्नुपर्नेमा निकाल्न सकेका छैनन् । ननिकाल्दै एक प्रकारले भेडाबाख्रा जस्तो मन्त्रीको ठूलो संख्या निर्माण गरेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीसँग नैतिक संकट भएको मैले देख्छु । तर पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग सरकार विस्तार गर्ने विशेष अधिकार हुन्छ ।
० अहिले बनेको वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले राजनीतिक परिस्थित फेरिएको हो ?
– चरित्रगत दृष्टिकोणले राजनीति जहाँको त्यहीँ छ । खेलोफड्को इत्यादि यिनीहरूले गर्दैछन् । जनताले यसपटकको मतदानमा यो खाले प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गरिदिए भने यो उनीहरूको अन्तिम अभ्यास हुन्छ । त्यसैले मतदातहरूले के गर्छन् ? त्यसैमा यिनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
० अहिले साना पार्टीहरू हराउन थाले । ठूला ठूला पार्टी मात्र रहन थाले । साना पार्टीहरू ठूला पार्टीहरूसँग एकीकृत हुन थालेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– साना पार्टीहरूले दोकान जस्तो चलाइरहेका थिए । आफ्ना श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने, सभासद् बनाउने घीनलाग्दो खेल उनीहरूको तर्फबाट भइरहेको थियो । यस्तो खालको प्रवृत्ति बढारिनु राजनीतिका लागि राम्रो हो ।
० यो चुनावमा क्षेत्रीय पार्टीहरू आउने सम्भावना हुन्छ कि हँुदैन ?
– त्यो सम्भावना थियो । तर क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई दुरुपयोग गरेपछि स्थानीय निर्वाचनमा क्षेत्रीय पार्टीहरूको कस्तो हालत भयो ? सबैले देखेका छन् । नेपाली जनता क्षेत्रीय र जातीय राजनीतिको पक्षमा पनि नेपाली जनता छैनन् भन्ने देखिएको छ । मूलप्रवाहको राजनीतिको पक्षमा नेपाली जनता छन् भन्ने यसपटकको चुनावको परिणामले देखाएको छ । यो हिसाबले मूलप्रवाहका राजनीतिक दलहरू नै बलियो हुने र क्षेत्रीय र सामाजिक मुद्दाहरू किनारा लाग्ने जस्तो देखिन्छ ।
० अहिले विभिन्न दलमा जो जो टिकटका लागि सिफारिस भएका छन्, त्यसमा पैसावाला, गुण्डा, ठेकेदार हाबी भएका देखिन्छन् । निष्ठाको राजनीति सकिँदै जान लागेको हो ?
– निष्ठाको राजनीतिक रामहरि जोशीको मृत्यु र भीमबहादुर तामाङको अवसानपछि सिद्धिसक्यो । अब नेपालको राजनीति डन र गुण्डाहरूको हुने भयो ।
० राजनीतिमा नैतिकता, मूल्य र मान्यता पनि हराउन थालेको हो ?
– नैतिकता, मूल्य र मान्यता नेपालको राजनीतिमा कहिले पनि आकृष्ट भएन । तपाईले पूरा राजनीति हेर्नुभयो भने विदेशी, पैसाका लागि काम गर्ने, स्वार्थका लागि लाग्ने र श्रीमतीहरूलाई हालीमुहाली गराउनेहरूकै अस्तित्व नेपालको राजनीतिमा देखिन्छ ।
० आगामी चुनावमा कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउने स्थिति देख्नुभएको छ ?
– जनताले कसरी हेरेका छन् ? त्यसमा भर पर्छ । यो चलखेल बढी भयो । चलखेल बढी भएकाले असामाजिक पक्षलाई कमजोर बनाउनुपर्छ र राजनीतिलाई मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताको मुड बन्यो भने त्यो सम्भावना पनि छ । होइन भने उनीहरूले अहिले जुन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन्, त्यो प्रणालीअनुसार कसैले कहिल्यै पनि बहुमत ल्याउँदैनन् । तर पनि जनताको निर्णय हेर्न बाँकी नै छ ।
० भनेपछि फेरि पनि संयुक्त सरकार बनिरहने स्थिति छ, होइन ?
– बहुमतको सरकार बन्दैन भन्ने नै छ । जस्तो प्रमुख प्रतपक्षीको त बहुमत नबन्ने नै भयो । किनभने ६०÷४० गर्नेवित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षको पक्षमा बहुमत नहुने प्रस्ट देखिएको छ । सत्ता पक्ष कांग्रेस छ, यसले राप्रपालाई बोकेर हिँड्ने जुन दुष्सप्रयास गरेको छ, यसलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने जनताले ठाने भने सत्ता पक्षले पनि बहुमत ल्याउँदैन । व्यक्तिगत रूपमा सबै दलका असल मान्छेहरू विजयी भएर आउने सम्भावना छ । सामूहिक रूपमा राजनीतिक दलहरू बढारिन सक्ने सम्भावना पनि छ । बहुदलीय व्यवस्थामा जनता नै न्यायाधीश हुन्छन् । न्यायाधीशको फैसला पर्खेर बस्न पर्ने भयो ।
वरिष्ठ र स्थापित प्राध्यापक हुँ
० तपाईलाई स्वतन्त्र बाम बुद्धिजीवी भन्न मिल्छ ?
– म वाम बुद्धिजीवी होइन । विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुँ । वाम बुद्धिजीवी भनेर तपाईहरूले लगाइदिएको टीका हो यो ।
० त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर मात्र भन्ने त ?
– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर मात्र होइन, सबैभन्दा वरिष्ठ र स्थापित प्राध्यापक पनि हुँ ।
० तपाईंलाई राजनीतिकर्मी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
– म राजनीतिकर्मी कहाँ हुँ ? विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पनि कहीँ राजनीतिक हुन्छ र ?
० राजनीतिक विश्लेषक भन्न सकियो, होइन ?
– राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासविद्, चिन्तक जे भने पनि तपाईको पायकअनुसार भन्न सक्नु हुन्छ
० वाममन्थी भन्न मिलेन ?
– वामपन्थी किन भन्ने ? विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पनि वामपन्थी र आमपन्थी भन्ने हुन्छ र ?
० तपाई कुनै समय कम्युनिस्ट विचारधारसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो नि ?
– आबद्ध थिएँ । सुरुमा म अखिलको कार्यकर्ता थिएँ । पेसामा लागेपछि अनुसन्धानदाता भएँ । अहिले प्राध्यापक छु ।
० भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टी छाडिसक्नु भयो ?
– कम्युनिस्ट पार्टीको जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध थिएँ । कम्युनिस्ट छाडेको या नछाडेको भन्दा पनि म २०३५÷३६ सालमा अखिलको कार्यकर्ता थिएँ । त्यतिबेला त्यसलाई माले भन्थे । म आबद्ध भएको अखिल मालेको जनवर्गीय संगठन थियो । त्यतिखेरको माले अहिले एमाले भएको छ । त्यसपछि म प्राध्यापन पेसामा लागें । राजनीतिबाट छुट्टिएँ । प्राध्यापनतिर लागेपछि पार्टीसँग मेरो संलग्नता रहेन ।
० अहिले स्वतन्त्र भएँ भन्न खोज्नु भएको हो ?
– मलाई प्राध्यापक मात्र भने भइहाल्यो नि । त्यत्रो स्टाटसलाई किन बेवास्ता गर्ने ?
Tarun Khabar0response सोमबार,३० आश्विन २०७४ 492 Views
ओली सरकार तीन वर्ष रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन
प्रचण्डलाई सहअध्यक्ष दिने भन्ने कुरा सम्भव छैन
सोमबार,२९ माघ २०७४
माओवादीलाई मिनिमाइज गरे पार्टी एकीकरण हुँदैन
सोमबार,२२ माघ २०७४
प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री मै हुन्छु
सोमबार,१५ माघ २०७४
राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको निर्णय सच्याउन माग
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मनोनयन नगर्नु…
बुधबार,९ फाल्गुन २०७४